Yaziwa ngala magama apholileyo e-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
NgoJanuwari 20, 2019 0 IiCententarios 11050
Enye yezona zinto zibalulekileyo xa uneakhawunti Instagram ligama, eli libalulekile ngokwenene ukusukela sisiseko esisiseko seakhawunti ukuba uqhuba
Kungenxa yeso sizathu le nto ukuba namhlanje sizokukunika iingcebiso ezilungileyo ukuze ube nokusemagqabini amagama e-Instagram kusondele.
Yintoni efunekayo ukuze ube namagama amahle kwi-Instagram?
Igama kufuneka libe yinto leyo vusa umdla kubalandeli bakho, kufuneka sikhumbule ukuba okwangoku zingaphezulu kwe-500 yezigidi zabasebenzisi abasebenzayo inyanga nenyanga. Ngenxa yeso sizathu xa kukho ukhuphiswano olungaka kunyanzelekile ukuba sigxininise.
Ukulula ngokulula kubalulekile ukuba ube negama elilungileyo, nangona igama leakhawunti yakho liza kubonakala kwabanye, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo into yokuba ezi ndidi zamagama abanakuba nzima kangako Umbhalo, kufuneka ube yinto enokukhunjulwa ngumntu wonke kwaye ayazi naphina.
Yonke igama olikhethayo kufuneka likulungele dibanisa ngokupheleleyo nento oyinikelayo eluntwini Ukuze ngale ndlela ukwazi ukudibanisa ngokukhawuleza igama kunye nezinto ozihambisayo
Akukho sondo okanye komelele
Zama ukunqanda naliphi na igama elinxulumene ngokuthe ngqo nento oyenzayo, nokuba ngaba zingamaphepha esiqulatho sesondo okanye umthambo olula. Elona ligama kwindalo yonke elivuthiweyo kodwa elinomtsalane kwaye linokunika intsingiselo kwinto oyinikezelayo ngaphandle kokuwela kokucacileyo.
Into efanelekileyo kukuba kuyo yonke inkqubo yakho sukutshintsha igamaUkuba uyathandwa, kungcono ukuba ushiye igama lakho, ukuba ligama levenkile, kungcono ukuba ungaliguquli, oku kunokuchaphazela ukukhangela kwabasebenzisi bakho. Ngokuyintloko kunokuchaphazela ukuba ukhona nefuthe.
Amagama e-Instagram owabona apha sele ekhona, kodwa ungayisebenzisa njengomzekelo onokuyisebenzisa ngegama lakho okanye yeyakho inkampani njalo. Khetha igama elilungileyo kunye yenza ishishini lakho kuthengiswe kwi-Instagram.
Igama lomfazi + Ikratshi. Umzekelo: EliaPride
Amagama e-Instagram ngesiNgesi
Mnumzana okanye uMiss
Amanye amagama aphambili kwi-Instagram
Igama lomfazi + Jenner
I "Akukho Gama"
Igama lam ndingu "Ukhathalele"
Ukukhawuleza nokuvutha ngumsindo
Igama lakho + Lee
Igama lomntu + iiSantos
Isantya + igama lakho (kunye)
Ndiyayithanda i-PLL <3
Igama lakho + Montana
Igama lakho + Toreto
Ungalitshintsha njani igama kwi-Instagram?
Kwimeko apho ubuyiqwalasele kwakhona kwaye ucinga ukuba lixesha lokuba ulandele la manyathelo akhankanywe apha ngasentla, siya kukushiya isifundo sokuba ungalitshintsha njani lula igama leakhawunti yakho kwisicelo.
Ngenisa iakhawunti yakho ye-Instagram.
Khetha "Hlela iProfayili."
Cofa kwindawo apho unegama "lakho" okanye "iGama lika ..." kwaye ulitshintshe ngokufaka isicatshulwa osifunayo.
Cofa ku- "Ready" kwikona ephezulu ngasekunene.
Nje ukuba utshintshe igama lakho kuya kufuneka ukhumbule ukuba kufuneka ulinde ithutyana ngaphambi kokuba wenze olunye utshintsho. Ke kufuneka uqiniseke kakhulu ukuba wenza utshintsho kwaye waneliseke ngalo ngaphambi kokuba wamkele.
Siyakunceda zikhuthaze kwiintanethi zentlalo.
1 Yintoni efunekayo ukuze ube namagama amahle kwi-Instagram?
1.4 Akukho sondo okanye komelele
1.5 Sukutshintsha igama
2 Imizekelo yamagama
2.1 Igama elinomdla
2.2 Amagama amantombazana
2.3 Amagama e-Instagram ngesiNgesi
2.4 Amanye amagama aphambili kwi-Instagram
3 Ungalitshintsha njani igama kwi-Instagram?
Ngaba kulungile ukubhalisa i-akhawunti yabucala ye-Instagram kwinkampani?
Fumanisa ukuba ungayenza njani imali ukubhala amanqaku